China DICHLOROMETHANE / METHYLENE CHLORIDE ifektri abakhiqizi | I-CHEM-PHARM
Ifomula lamakhemikhali: CH2Cl2
Inombolo yokufinyelela ye-CAS: 75-09-2
Ukucaciswa / Ukuhlanzeka: 99.95% min
IGAMA LOMKHIQIZO: METHYLENE CHLORIDE
Ifomula Yamamolekhula dichloromethane: CH2Cl2; Kuyisixazululo esingenakucijwa esinephuzu elibilayo eliphansi futhi sivame ukusetshenziselwa ukufaka esikhundleni se-petroleum ether evuthayo, i-diethyl ether, njll.
Igama lesiShayina: dichloromethane
Isisindo Yamamolekhula: 84.93
Iphuzu lokubilisa: 39.8 ℃
Ukuncibilika kwamanzi: 20g / L (20 ℃)
Ukubukeka: uketshezi olungenambala nolusobala oluyingozi
Ukupakisha: 270KGS isigubhu sensimbi eluhlaza okwesibhakabhaka ； 20'fcl: 80drums
UN NO. 15: 93
Inombolo ye-EINECS: 200-838-9
I-Solubleness: ayincibiliki emanzini futhi incibilika ku-phenol, aldehyde, ketone, glacial acetic acid, triethyl phosphate, ethyl acetoacetate, ne-cyclohexane; hlanganisa futhi uncibilike nezinye i-chlorine ye-hydrocarbon solvent ethyl alcohol, i-diethyl ether, ne-N, N-dimethylformamide;
Ukuzinza: Ekushiseni okujwayelekile (igumbi lokushisa) nalapho kungekho umswakama, i-dichloromethane izinze kakhulu kunezinto ezifanayo (i-chloroform ne-carbon tetrachloride);
Ukubola kokulimaza: Uma oxhumana namanzi isikhathi eside, kuzobola kancane futhi kukhiqize i-hydrogen chloride;
I-polymerization enobungozi: ngeke yenzeke
I-Dichloromethane inamandla kakhulu okuqedwa futhi inobuthi obuncane; isetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni ifilimu ephephile neMakrolon; okusele kusetshenziselwa i-solvent paint, i-ejenti yensimbi yokuqeda insimbi, umusi nomjovo wegesi ejenti, i-polyurethane eshaya i-ejenti, i-ejenti yokukhulula kanye nokususa upende;
I-Dichloromethane iwuketshezi olungenambala. Isetshenziswa njengendawo yokuphendula embonini yekhemisi futhi isetshenziswa ekulungisweni kwe-penbritin, i-carbenicillin, i-cephalosporin, njll., Kwisinyibilikisi sokukhiqiza ifilimu, isisombululo se-dewaxing solvent, i-aerosol propellant, i-organic synthesis extraction agent, i-polyurethane kanye nezinye izinto ezinamagwebu i-metal cleaner ngesikhathi sokukhiqizwa kwepulasitiki ene-foam.
Langaphambilini IBENZALKONIUM CHLORIDE
Olandelayo: ISODIUM DICHLOROISOYANURATE / SDIC